China Vetikal nsị mgbapụta emepụta na suppliers | KAIQUAN
WL usoro nke obere vetikal nsị nfuli na-bụ-eji na ọchịchị injinịa, ụlọ mwube, ulo oru mmiri na mmiri nsị. Enwere ike iji ha mee ka mmiri nsị, mmiri mmiri mmiri, mmiri ozuzo na mmiri nsị obodo nwere ihe ndị siri ike na ogologo ogologo.
Na-asọ: 10-4500m3 / awa
Isi: O rue 54m 3. Liquid okpomọkụ ＜ 80ºC ，
Liquid njupụta: ≤1 050 n'arọ / m3
PH Uru: 5 ~ 9
Mmiri mmiri ekwesịghị ịdị ala karịa: “▽” akara gosiri na nwụnye akụkụ esereese.
Mgbapụta ike ijikwa mmiri mmiri na corrosion siri ike ma ọ bụ ihe siri ike.:
Akara nke siri ike na mmiri adịghị ihe karịrị 80% nke ntakịrị ọwa mmiri kachasị mma nke mgbapụta ahụ: Firber ogologo nke mmiri mmiri kwesịrị obere karịa mgbapụta ihapu dayameta.
Nka na ụzụ Eserese
WL (7.5kw-) Series Vetikal nsị mgbapụta CN
WL (11kw +) Series Vetikal nsị mgbapụta CN
Vetikal nsị mgbapụta Uru:
1. The pụrụ iche designe nke abụọ-ọwa impeller, saa mbara mgbapụta ahụ, mfe rue ihe siri ike akpọkwa, eriri adịghị mfe ọnya, kasị adabara ndị e ji ebu nke nsị.
2. Thelọ akara ahụ na-agbaso imewe ihe owuwu gburugburu, nke nwere ike igbochi adịghị ọcha na nsị site na ịbanye akara igwe ruo n'ókè ụfọdụ; N'otu oge ahụ, a na-eji oghere valvụ arụ ụlọ imechi ihe mkpuchi. Mgbe mgbapụta ahụ malitere, ikuku dị n'ime ụlọ akara ahụ nwere ike iwepụ iji chebe akara igwe.
3. Mgbapụta ahụ nwere usoro kwụ ọtọ, nke nwere obere mpaghara; A na-etinye impeller ozugbo na igwe eletriki, na-enweghị njikọta, mgbapụta ahụ nwere mkpụmkpụ mkpụmkpụ, usoro dị mfe, dị mfe ilekọta; Ezi uche na-agba nhazi, obere impeller cantilever, elu axial ike itule Ọdịdị, ime ka agba na n'ibu akara ọzọ pụrụ ịdabere na, na mgbapụta na-agba were were, na vibration mkpọtụ bụ obere.
4. A na-etinye mgbapụta ahụ n'ime ụlọ mgbapụta akọrọ maka nhazi dị mfe.
5. Dịka mkpa nke ndị ọrụ si dị, enwere ike ịkwado ya na kọmịị njikwa eletriki na ihe ntụgharị mmiri mmiri, nke enweghị ike ịchịkwa mmalite na nkwụsị nke mgbapụta ahụ na-akpaghị aka dịka mgbanwe nke ọkwa mmiri ahụ, na-enweghị nlekọta pụrụ iche. , ma hụkwa na arụmọrụ nke moto ahụ, nke dị oke mfe iji.
Nke gara aga: XBD Firefighting mgbapụta
Osote: Mincing Submersible nsị mgbapụta
Vetikal Nsị Pump Structural Diagram
Vetikal Nsị Pump Spekrum Didị na Nkọwa